IPineforest Villa pool kunye neBBQ w / ukuchaphaza kweglam - I-Airbnb
IPineforest Villa pool kunye neBBQ w / ukuchaphaza kweglam
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguKalliopi
I-villa ihleli kwindawo ephakamileyo kwinduli yesixeko sase-Ioannina kwaye inombono omangalisayo! Iziko yimizuzu emi-2 ngemoto okanye unokuthatha uhambo lokuhla (imizuzu engama-25) kwaye ubuye ngeteksi (+ -5 euro).
Kukho ihlathi lepine elizinyuko ezimbalwa ukusuka endlwini apho unokuthatha uhambo okanye ukubaleka kancinci.
Indlu inedama lokuqubha labucala (ngoMeyi-Septemba) kunye ne-BBQ yangaphandle apho unokuphumla kwaye wonwabele imini yakho!
kukho indawo enkulu yokupaka ngaphandle kwendlu!
Indlu ilala abantu abasi-7!
Kukho amagumbi okuhlala ama-2 kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kubandakanya i-dishwasher. Igumbi elinye lokulala lisezantsi elinegumbi lokuhlambela kwaye amagumbi okulala ama-2 akumgangatho ophezulu kunye nelinye igumbi lokuhlambela kunye negumbi lokuhlala elincinci elineembono ezintle ngaphezulu kwesixeko.
Iintsuku eziyi-7 e Ioannina
Ivilla ihleli endulini kwindawo ekhuselekileyo nekhuselekileyo!
Umbuki zindwendwe ngu- Kalliopi
Sihlala kwindlu esecaleni kwe-villa kwindlu encinci kwaye siya kuba khona ngemibuzo yakho ukuba uyasibuza. Kananjalo uya kuba nenombolo yethu yokuqhagamshelana nathi ngayo nantoni na oyidingayo kwindlu okanye utyelelo lwakho esixekweni!
Sithetha isiGrike, isiNgesi, isiTaliyane, isiSwedish, isiTurkey
Sihlala kwindlu esecaleni kwe-villa kwindlu encinci kwaye siya kuba khona ngemibuzo yakho ukuba uyasibuza. Kananjalo uya kuba nenombolo yethu yokuqhagamshelana nathi ngayo nantoni…
Inombolo yomthetho: 00000335503